Iintsuku ezidlulileyo ziyakunyanzela ukuba ukhusele isiseko sakho kwimikhosi yeentshaba | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iintsuku ezidlulileyo: uKhuselo kunye neQhinga ngumdlalo omtsha wabo kufuneka bazikhusele isiseko apho kufuneka sidubule utshaba ngexesha lokwenyani lokonwaba kwethu. Omnye wale midlalo apho kufuneka siphucule izakhono zethu kunye neenkcukacha-manani zokudubula kwethu ukuze siqhubeke kakuhle.
Umdlalo omtsha we I-Android yenziwe ngumvelisi omnye kwaye oko kuyenza umdlalo we-indie oqhelekileyo; IStardew Valley ekude eyenziwe ngumntu omnye. Apha kuya kufuneka sidlule kumanqanaba ukuze siphucule amanani ethu ukuze sijongane neentshaba zamandla amakhulu.
1 Kancinci kancinci siya kuba namandla
2 Ngaphezulu kwama-15 ahlukeneyo kwiintsuku ezidlulileyo
3 Umdlalo wenziwe kakuhle
Kancinci kancinci siya kuba namandla
Kwiintsuku eziQalile kufuneka nje sibe nomonde oyingcwele ukuya kwinqanaba lokuqala apho kungangenzeki kakhulu. Sithetha ngeentshaba ezimbalwa eziza kuqaliswa kuthi eziza kulungelelaniswa ngokwaneleyo ukuze sikwazi ukuphelisana omnye nomnye lo gama injongo yethu ilungile.
Yiyo loo nto siza kuqhubela phambili ukongeza izakhono ezitsha, ezinje Omoya ubetha amaqela Iintshaba okanye ukudityaniswa komlingane okanye umncedisi oya kuthi asivumele ukuba sivelise isixa esikhulu somonakalo kula mikhosi yeentshaba eya kuthi inyuse inani.
Sinamanqanaba amaninzi okudlala kwaye ngamnye uya kuba nohlaselo lweqela. Oko kukuthi, kuya kufuneka sazi ukuba sidlala njani amakhadi ethu ukuxhomekeka ekuqaleni komlo osisiseko ukuze kuthi xa kuvela iintshaba ezinzima, masisebenzise ezo zakhono zintsha zifunyenweyo okanye kulowo usebenza naye ophethe izixhobo zakhe usinceda siphume kwinqanaba ngemibala ephaphazelayo.
Ngaphezulu kwama-15 ahlukeneyo kwiintsuku ezidlulileyo
Iintsuku ezidlulileyo zisivumela ukuba sifikelele ngaphezulu kwama-15 oomabophe, izixhobo ezingaphezulu kwama-20 kwaye sibize amaqhawe ali-15 azakusinceda ekulweni. Kukwakhona ubuchule obukhethekileyo obuyi-15 kunye nokukwazi ukubuyisa ixesha. Konke oku kuyakongeza kwi Sifumana umnqweno walo mdlalo yeyasimahla kwi-Android.
Enye into ekufuneka siyithathele ingqalelo yile ulawulo lwegolide, kuba iyakuxhomekeka ekubeni singavula izakhono kunye neepele, okanye ukuba uhlaselo lwethu lunamandla ngakumbi. Kuya kufuneka silinganise zombini izakhono kunye namanqaku esiya kuthi siwanike kuhlaselo lwethu okanye ekuzikhuseleni, ukuze sizoyise ezo ntshaba ziya kwenza izinto zibe nzima kakhulu kuthi xa zininzi kwiscreen; kunye nenyaniso abaya kuba yiyo, hamba uyilungiselela.
Iintsuku eziDlulileyo ngumdlalo lowo Ayiguqulelwanga kwiSpanish, kodwa akukho mfuneko yokuba usiqonde isiNgesi kakhulu ukuze ufumane malunga naso, kuba yonke into ibonwa kakhulu. Ngesakhono esincinci siza kuqala ukulinganisa kwaye sonwabe kancinane kulo mdlalo onokuphuhliswa ngumntu omnye kuphela ongalunganga kwaphela.
Umdlalo wenziwe kakuhle
Ngokuqinisekileyo oko masibone uhlaziyo kulo mdlalo kungekudala ikwindawo elungileyo kwaye isikhumbuza ezinye ezifanayo apho kufuneka sikhusele amandla ethu kuhlaselo lwabaphathi bokugqibela, ukuba bakho kwaye siya kubafumana bekhawuleza kakhulu, kwaye zonke ezo ntshaba ziya kuza ngokwahlukileyo isantya. 100 Days Ngomnye wale midlalo ifanayo, ke ukuba ugqibile ngale, yiya kwi-zombie.
Iintsuku ezidlulileyo ngumdlalo owenziwe kakuhle kwaye oko kuhlangana nezakhiwo ezininzi kolu hlobo lomdlalo. Ukuba sinoluvo lokuba kufuneka sazi ukuba singajolisa njani ukuze utshaba lungasibulali, ubunzima obulinganayo kunye nemizobo efanelekileyo, kodwa oko kufezekisa iziphumo ezinqwenelekayo. Ineziphene zayo, kodwa ngokuqinisekileyo zibangelwa kukungabikho kwexesha kwicala lomphuhlisi.
Umdlalo wasimahla I-freemium ye-Android ebizwa ngokuba ziintsuku ezidlulileyo Kwaye ukusukela namhlanje ungaqala ukuvavanya ukuze uqhubeke kakuhle kwaye ube liphupha elibi kuzo zonke ezo nqwaba zeentshaba eziza kuza ngendlela yakho ukusuka kumzuzu wokuqala. Ayizukuba ngumdlalo oza kuwukhumbula, kodwa iya kubulala iiyure zexesha. Sinokuqinisekisa ukuba.
Kusebenze kakuhle kwinqanaba ngokubanzi
Oopopayi balahlekile kubaphathi bokugqibela
Iintsuku ezidlulileyo-Ukhuseleko lweNqaba
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Khusela isiseko sakho kwimikhosi yeentshaba kwiintsuku ezidlulileyo: uKhuselo kunye nesiCwangciso